Fantatra amin'ny fotsy manjelanjelatra sy ny haingon-trano manaitra, Calacatta dia tonga lafatra amin'ny faritra midadasika, ao anatin'izany ny rindrina, ny gorodona ary ny orana.azo namboarina. Mifandraisa aminay azafady!
Votoaty quartz >93%
Ora nanomezana 2-3 herinandro taorian'ny nahazoany ny fandoavam-bola
Glossiness >45 degre
MOQ Ny baiko fitsarana kely dia raisina.
santionany Free 100 * 100 * 20mm santionany azo omena
FANOMEZANA 1) 30% T / T fandoavam-bola mialoha sy ny fifandanjana 70% T / T manohitra B / L Copy na L / C amin'ny fahitana.
2) Misy fepetra fandoavam-bola hafa azo atao aorian'ny fifampiraharahana.
Fanaraha-maso kalitao Fandeferana hateviny (lavany, sakany, hateviny): +/-0.5mm
QC manamarina ny ampahany amin'ny ampahany hentitra alohan'ny famonosana
tombony Mpiasa za-draharaha sy ekipa mpitantana mahomby.
Ny vokatra rehetra dia hojerena amin'ny ampahany amin'ny QC za-draharaha alohan'ny hanangonana.
2. High compressive strength ,high tensile strength.Tsy misy fotsy, tsy misy deformation ary tsy misy triatra na dia taratry ny masoandro aza.Ny endri-javatra manokana dia mahatonga azy io ho ampiasaina betsaka amin'ny fametrahana gorodona.
3. Ny fatran'ny fanitarana ambany: Super nanoglass dia afaka mitondra ny mari-pana amin'ny -18 ℃ ka hatramin'ny 1000 C tsy misy fiantraikany amin'ny rafitra, ny loko ary ny endriny.
4. Ny fanoherana ny harafesina sy ny fanoherana ny asidra sy ny alkali, ary ny loko dia tsy ho levona ary ny tanjaka dia mitoetra ao anatin'ny fotoana maharitra.
5. Tsy misy rano sy loto.Mora sy mora ny fanadiovana azy.
6. Non-radioactive, tontolo iainana ary azo ampiasaina indray.
“Avo kalitao” · “Fahombiazana ambony”
Mahay tsara an'izao tontolo izao ny APEX ary nampiasa vola be tamin'ny fampidirana ireo zotram-pamokarana lehibe sy fitaovana famokarana be pitsiny avy any an-toerana sy any ivelany.
Ankehitriny ny Apex dia nampiditra fitaovana feno toy ny tsipika roa vita amin'ny takelaka vita amin'ny vato quartz ary andalana telo famokarana manual telo . Manana tsipika famokarana 8 izahay miaraka amin'ny fahafaha-manao isan'andro amin'ny slabs 1500 ary ny fahafaha-manao isan-taona mihoatra ny 2 tapitrisa SQM.
Vato quartz calacatta fotsy ( Item NO. 8872)
Countertops Quartz maoderina /Lafitrano misy soratra fotsy kokoa sy tsipika mainty /Calacatta Quartz Stone(ITEM: APEX-2005 APEX-2010 APEX-2011 APEX-5015 APEX-8690)
Toetran'ny quartz Calacatta ( Item No. Apex 8860)
Countertops Quartz marika tsara indrindra Vidin'ny Quartz Countertops Vato Quartz Gray Vidin'ny marbra Quartz Tsena Stone Engineered Quartz Countertops Slabs